Human Rights Watch: Dargaggoonni Eertiraa miiliyoona walakkaa ta'an loltuu hin taanu jechuun baqataniiru - BBC News Afaan Oromoo
Human Rights Watch: Dargaggoonni Eertiraa miiliyoona walakkaa ta'an loltuu hin taanu jechuun baqataniiru
Goodayyaa suuraa Dargaggoo Ertiraa kaampii baqattootaa Tuniiziyaa keessa, 2011
Eertiraan ammallee biyyaa lammiileenshee hedduminaan keessaa baqatan ta'uushee gabaasni Hiiyuuman Raayitis Wach (HRW) ifa godheera.
Gabaasni dhaabbatichaa akka ibsutti sababoonni lama lammiileen Eertiraa akka baqa hin dhiifne isaan taasiseera.
Tokkoffaan dhiitama mirga namoommaa mootummaan pireezidaant Isaayaas Afaworqii yoo ta'u inni lammaffaan immoo tajaajila loltummaa hin beekamnedha.
Akka seera biyyattitti dargaggoon tajaajila biyyaaleessaaf kan deeman yoo umuriisaanii 18 guutedha. Ta'us garuu dargaggoon keessumaayyuu magaalaa jiraatan umuriinsaanii osoo 18 hin guutin loltummaaf ni ergamu jedha Hiiyumaan Raayitis Wach.
Hiiyuuman Waayitis Wach Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii wabeeffachuun akka gabaasetti bara 1993-2018'tti lammiileen Eertiraa 507,000 biyyaa baqataniiru jedha. Kunis lakkofsa ummataa biyyaattii keessaa %10 ta'a.
Eeritiraan 'aanga'oota koo na jalaa ajjeessuuf' jechuun Qaataariin himatte
Fedhii loltuu ta'uu hin qabu yookiin loltuu biyyaaleessaa keessatti hirmachuu hin barbaadu jechuun kan hin hayyamamneefi adabbii guddaa qabaachuusaa immoo dargaggoon biyyasaanii gad dhiisanii akka baqataniif sababa guddaa ta'eera.
Kanaan dabalatatti dargaggoon hedduun indaastirii mootummaa keessatti kaffaltii xiqqaadhaan akka hojjatan taasifamuun isaanii yoo ta'u kan hafan immmoo dhaabbata abbootii qabeenyaatiin albuuda baasan keessatti hojjachuun humnasaanii akka qisaasessan dirqamu.
Goodayyaa suuraa Dargaggoota Eertiraa hojii albudaarratti hirmaatan
Eertiraan biyyoota Afrikaa hacuucamni keessa jiru keessaa ishee tokko. Qabiinsa mirga namummaa biyyattii keessa jiru ilaaluuf yaaliin Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii taasise biyyattii dhorkiteetti jedha gabaasichi.
Pireezidaant Isaayas Afaworqii eega biyyatti of dandeettee biyya taatee as waggoota 27 aangoorra kan turan yoo ta'u achi booda waanni filannoo jedhamu biyyattii keessatti geeggefamee hin beeku.
Itoophiyaa faana bara 2018 waliigaltee nageenyaarra gahanis Eertiraan heera 1997 raggaasifte garuu hojiirraa oolchuu hin dandeenye.
Yeroo dhihootti biyyattiin manneen barnoota dhaabbilee amantaa jala turan dirqiidhaan gara harka mootummaatti kan galchite yoo ta'u dhaabbilee fayyaa bataskaanaa Kaatoliikii jala turanis cufteetti.
Itiyoo-Eertiraa: Walitti dhufeenyi daldala Itiyoo-Eertiraa toora qabataa laata?
Motummaan Eertiraa ergamtoonni naannichaa maraataa jiru jedhe
Mucaan qurxummii lilmoon morma gubbaa waraaname, ajaa'ibaan lubbuun hafe
Waa'ee Koroonaavaayiras maal beektu?
Sagaleen lammii Masrii waggaa 3,000 dura du'ee dhagahame
Gaazexeessaan gameessi BBC sababa 'PTSD'n hojiisaa gadhiise
Kirkirri lafaa cimaan mudate yoo xiqqaate lubbuu namoota 18 galaafate